Pi-maso Arabo: Ny Ao Afovoany-Atsinanana An-tsary · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Septambra 2017 2:07 GMT
Fiatoana manaraka ny ao Koety, toerana anehoan'i Fonzy an'ireo sary maneho ny endriky ny tanànan'i Koety ao anaty vovoka mitora-jofo.
Dieny mbola eto Koety isika, i intlxpatr manolotra ho antsika ity tahirintsary iray ahitàna ny fiovan'ny faravodilanitry ny tanànan'i Koety ity — tsy misy vovoka — afaka jerena ato [En].
Ny sary farany omena antsika dia sary iray nopihan'ny bilaogera iray avy ao Bahrain, Mahmood Al Yousif, ahitàna bulbul iray ao anatin'ny akaniny, vao avy foy indrindra tao anatin'ny zaridainany.
Ny foy voalohany tamin'ireo bulbul nanamboatra akany tato amin'ireo ficus-nay. Atolotro ho an'i raiko ity sary ity izay feno herintaona rahampitso ny nandaozany ity tany ity.